धनगढी । सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा विद्यालय भरिभराउ भएर खुला आकाशमुनि क्वारेन्टाइन बनाएका खबर आइरहेका बेला उपमहानगरपालिका क्षेत्रकै क्वारेन्टाइन अस्तव्यस्त पाइएका छन् । तराईको ४२ डिग्रीको तापक्रममा पनि अधिकांश क्वारेन्टाइनमा पंखा उपलब्ध छैन । खानेपानीको अभाव छ । भारतबाट आएका नागरिकलाई खाना, खाजा, बास र स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क भनिए पनि त्यो व्यवस्था हुन सकेको छैन ।
सोही वडाकै उमेशसिंह ठगुन्ना र उनका भाइ भारतबाट फर्किएर क्वारेन्टाइनमा बसेको मंगलबार तीन दिन भयो । उनीहरूले त्रिनगर माविको भवनको बरन्डामा बेन्च राखेर खाट बनाएका छन् । ‘यो विद्यालयभित्र हुलिदियो । केही थिएन । सबै कोठा भरिभराउ थिए । काँ गएर सुत्नु त ? ’, उमेशले भने, ‘त्यसैले यो बरन्डामा बेन्च जोडेर पल्टिने जुक्ति निकालेका छौं ।’
उनीहरूलाई पनि बिहान नास्ता, दिउँसो र बेलुकीको खाना घरकाले ल्याइदिन्छन् । ‘नास्ता र खाना मात्रै होइन, ओढ्ने–ओछ्याउने र पंखासमेत हामीले घरबाट मगाएका छौं’, उमेशले भने, ‘सुरुको दिन त बिजुली पनि दिएन । कराएपछि मात्रै बल्ल बिजुली दियो । अहिले बरन्डामा सुतिरहेका छौं ।’
‘संक्रमितहरूको पनि सीमामै छनोट गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो’, हर्कबहादुर चन्दले भने, ‘कोरोना लागेका र नलागेका एकै विद्यालयमा छन् । एकै धारा छ । शौचालय पनि सेयर गर्नुपर्छ ।’
सरकारले जारी गरेको क्वारेन्टाइन निर्देशिकामा बिहान ८ बजे खाजा, दिउँसो खाना, बेलुकी ४ बजे खाजा र राति ८ बजेभित्र खाना दिनुपर्ने तोकिएको छ । हरेक क्वारेन्टाइनमा बिहान र बेलुकी सबैको थर्मल गनबाट ज्वरो मापन गर्नुपर्ने, क्वारेन्टाइनमा एम्बुलेन्सको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
‘मापदण्डअनुसारको सेवासुविधा कसरी दिने ? न प्रदेश सरकारबाट पैसा आएको छ न संघ सरकारबाटै’, धनगढी–१ का वडाध्यक्ष सन्तोष मुडभरीले भने । उनले खानेपानी अभाव भएको पनि स्वीकार गरे ।
सरकारले क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिका लागि दैनिक ५ सय १० रुपियाँ दिने भनेको वडाध्यक्ष मुडभरीले सुनाए । ‘हामीसँग रकम आएको छैन । क्वारेन्टाइनको निर्देशिका पनि बनेको छैन’, उनले भने, ‘त्यो रकम आएपछि नगदै बुझेर लैजानुहोला । अहिले घरबाटै खाना मगाउनुस् भनेका छौं ।’ घरबाट पनि खाना ल्याउन नमिल्नेहरूका लागि त्यसको बन्दोबस्त गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
धनगढीका ४० वटा विद्यालयलाई क्वारेन्टाइन बनाइएको छ । ती क्वारेन्टाइनमा सोमबारसम्म १ हजार १ सय २८ जना बसेका छन् । सरकारी विद्यालयमा रहेका अधिकांश क्वारेन्टाइन अस्तव्यस्त छन् ।
https://www.corporatenepal.com/2020/06/183229/ २१ जेष्ठ २०७७, बुधबार
नेपालीहरुलाई दश गजामा ल्याउँदै छाड्दै भारत
कोरोना संक्रमित देखिने क्रम बढेसँगै काठमाडौं उपत्यकामा थप क्वारेन्टाइन आवश्यक
फेरि तीन जना कोरोना संक्रमित थपिए, तीनै जना बारा पर्साका क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरु
विदेशबाट फर्किएका ९६ नेपाली खरिपाटीमा, १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राखिने